शिशिर भण्डारीले दुईटी बिहे गर्छु भन्दा हाँसेरै बेहोस ! हेर्नुहोस घमासान दोहोरी (भिडियो) « Np Online TV
शिशिर भण्डारीले दुईटी बिहे गर्छु भन्दा हाँसेरै बेहोस ! हेर्नुहोस घमासान दोहोरी (भिडियो)
कलाकार तथा समाजसेवी शिशिर भण्डारीले सम्पुर्ण नेपालीहरुलाई बिजया दशमी २०७६ सालको मुरी मुरी शुभकामना दिएका छन् । शिशिरले आफ्नो युटुब च्यानल मार्फत देश तथा परदेशमा हुने नेपालीहरुलाई बिजया दशमीको शुभकामना बाँडेका हुन् । साथै उनले गायिका भावना आचार्यसँग दोहोरी खेल्दै निकै रमाईलो पनि गरे । पछिल्लो समय शिशिर भण्डारीका लाईभ दोहोरी भिडियोहरु पनि दर्शकहरुले अत्याधिक रुचाएका छन् ।
भावनासँगको दोहोरीमा शिशिरले दुई वटी बिहे गर्नेलाई गाह्रो पर्ने बताउँदै हसाएरै मुर्छा पारे । पछिल्लो समय बाल प्रतिभा कमला घिमिरेसँग लाईभ दोहोरी भिडेका शिशिरले उक्त दोहोरी भिडियोलाई निकै रमाईलो बनाएका थिए ।भिडियो: